မိုသာ(ခ) ယာယီ နေကာဟ် အကြောင်း လေ့လာကြ ပါစို့ … အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
မိုသာ(ခ) ယာယီ နေကာဟ် အကြောင်း လေ့လာကြ ပါစို့ …
ဒီဇငျဘာ ၉, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၅ ညနေ News Code : 871802 Source : ABNA Link:
ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်လေး အတွက် အနည်းငယ်ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း သိစေရန် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မိုရှီးရာဇီး ၏ (( شیعه پاسخ می گوید )) ကျမ်း မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏လက်ထက်၌မိုသာ(ခ)ယာယီ နေကာဟ်ရှိခဲ့ကြောင်းအစ္စလာမ်သာသနာပညာရှင်များအားလုံးကိုလက်ခံအတည်ပြုထားပါသည်။အုပ်စုတစ်ချို့ကတင်ပြချက်အရဒုတိယခလီဖွာလက်ထက်၌၎င်းကိုတိုင်သော်၎င်း၊နောက်တစ်အုပ်စု၏တင်ပြချက်အရတမန် တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်(ဆွ)ကိုယ်တော်တိုင်မိမိ၏ခေတ်ကာလ၌ယာယီနေကာဟ်ကို ပိတ်ပင်ထားမြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ)နောက်လိုက်နောက်သား များအနေဖြင့်လက်ခံယုံကြည် သည်မှာယာယီနေကာဟ်သည်မည်သည် ခေတ်ကာလ(တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏လက်ထက်မှယနေ့အထိ) တား မြစ်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အပြင်ယနေ့အထိ(သက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ)တည်ရှိနေပါသည်။
တစ်ချို့အဟ်လေစွတ်န္နတ်ညီအစ်ကိုများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ယုံ ကြည်မှုခြင်းတူညီသော်လည်း အများစုသည်လက်မခံချေ။ထို့အပြင် အမြဲတမ်းဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းပြချက်များထုတ်ကာစောဒကတက်ကြပါသည်။
အမှန်တကယ်စောဒကတက်ဖို့အရာမဟုတ်ဘဲ၊ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးသီးခြားမှုထူးချွန်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။ ဤယာယီနေကာဟ်ဖြင့်မြောက် မြားစွာသောလူမှုရေးအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
၁။အရေးကြီးမှုနှင့်လိုအပ်မှုမြောက်မြားစွာသောလူထုကြီးအနေဖြင့်အထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းဖို့အခက်အခဲများရှိနေပါ သည်။ အကြောင်းသည်ကားမင်္ဂလာဆောင်ရာ၌ရှေ့ပြေးကိစ္စများကို စီစဉ်ရခြင်း၊တာဝန်ဝတ္တရားအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံတာဝန်ယူရခြင်း၊ထို့အပြင်အ ခြားပြင်ဆင်မှုများကို ပြုလုပ် ရပါသည်။ ဤလုပ်ရပ်သည်အချို့လူငယ်၊လူ ရွယ်များအတွက် အခက်အခဲရှိနေပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်
၁။ ကျောင်းသားများအနေဖြင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်ကာလ၌စာသင် ကြားရမှုသက်တမ်းရှည်လျားသည် အတွက်လူငယ်များအနေဖြင့်မင်္ဂလာ ဆောင်နှင်းရန်အခက်အခဲရှိပေသည်။အကြောင်းသည်ကား အလုပ်အကိုင်မရှိ ခြင်း၊သင့်တော်သောနေစရာအိမ် မစီစဉ်နိုင်ခြင်း၊အခြားအသုံးစရိတ်များ၊ရိုး ရိုးမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ မင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်မလုပ်နိုင်ခြင်းအခြားလိုအပ်သောအ သုံးအဆောင်၊ မစီစဉ်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
၂။တစ်ချို့ အိမ်ထောင်သည်များအနေဖြင့် ရပ်ဝေးမြေခြား နိုင်ငံရပ်ခြားများ၌ ကာလကြာရှည်စွာ နေထိုင်ရသဖြင့် ကာမဆက်ဆံမှုနဲ့ပက်သက်ပြီးအခက် အခဲရှိပါသည်။အကြောင်းသည်ကား အမျိုးသမီးဇနီးနှင့်အတူမနေရခြင်း
၃။တစ်ချို့ အိမ်ထောင်သည်များ၏ဇနီးသည်များသည်ကာမဆက်ဆံမှု၌ အပြည့်အ၀ မပေးနိုင်ပဲအခက်အခဲရောဂါအမျိုးမျိုးကိုခံစားနေရသော ဝေဒနာရှင်များ ဖြစ်ပါသည်။
၄။တစ်ချို့ စစ်မှုထမ်းစစ်သည်များဖြစ်ကြသည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်များနှင့်အခြားနေရာများ၌ကာလကြာရှည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသည့်အတွက်ကာမစပ်ယှက်မှု၌အခက်အခဲများနှင့် တွေ့ဆုံနေရသည်။ ဤအတွက်ကြောင့်သမိုင်းစာမျက်နှာကပြဆိုနေသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) လက်ထက်၌မြောက်မြားစွာသောအစ္စလာမ်စစ် သည်များအတွက် ဤကဲ့သို့သောအခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်ရလာသည်အတွက် မိုသာ(ခ) ယာယီနေကာစနစ်သုံးရန်အတွက်အကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်ဖြစ် လာခဲ့ပါသည်။
၅။ တစ်ခါတစ်ရံဇနီးကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရချိန်၌လည်းကောင်း၊ အခြားအခက်အခဲ များ ကြောင့်လည်းကောင်း၊ လူငယ်လူရွယ်ဖြစ်သော ခင်ပွန်းသည်များအတွက် ကာမစပ် ယှက်မှုတွင် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါသည်။ ဤကဲ့သို့သောလူမှုရေးလိုအပ်ချက်များ ၊ အခက်အခဲများသည် အမြဲလိုလို တွေ့ကြုံရ၏။ တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်တမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ)၏ လက်ထက်၌သာဤကဲ့သို့ အခက်အခဲရှိခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲလက်ရှိမျက် မှောက်ခေတ်၌လည်းပိုမို၍တွေ့ကြုံနေရပါသည်။
လူသားအနေဖြင့်ဤကဲ့သို့သော်အခက်အခဲများနှင့်တွေ့ကြုံရသည် အခါ၎င်းတို့၏ရှေ့၌လမ်းနှစ်လမ်းပေါ်ထွက်လာပါသည်။ တစ်လမ်းကالعياذباالله ပြည့်တန်ဆာများနှင့်ဆက်သွယ်ကြပြီး၊ နောက်တစ်လမ်းကတရားဝင်ယာယီနေကာဟ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းနေကာဟ်ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အမြဲနေကာဟ်၌တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများမတွေ့ကြုံရသည်အပြင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှလည်းကာမစိတ်ကိုရှရီ အတ်အရတရားဝင်ကာမစိတ်ကိုဖြည့်စွက်ဖြည့်ဆည်းရာဖြစ်ပေသည်။
ဤလမ်းနှစ်လမ်းကိုလုံးဝမကျင့်သုံးပဲနေဖို့အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောလည်း အများစုလူထုအတွက်မဖြစ်နိုင်ချေ။ တစ်နည်းဆိုရလျှင်တစ်ချို့လူများစဉ်းစားစိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးလုပ်ဆောင်ရန် ခက်ခဲသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်းပဲ ၎င်းတို့အနေဖြင့်ဤနေကာဟ်အား မိုသာ(ခ)နေ
ကာဟ်ဟုအမည်မတပ်ထားသော်လည်းပဲ စည်းကမ်းချက်များလုပ် ဆောင်ချက်များသည် မိုသာကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်ကား - မစ်ယာရှာဒီ(ခ) မစ်ယာနေကာဟ်၌မင်္ဂလာ ဆောင်မည့် သတို့သားအနေဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား မိမိဆန္ဒရှိသောရက် အတိုင်း အတာထိပေါင်းသင်းရန် ပြီးလျှင်ကွာရှင်းပြတ်စဲရန်နီယသ်ထား ပြီး နေကာဟ်လုပ်ရန်ခွင့်ပေးထားခြင်းကိုခေါ်ပါသည်။
၎င်းနေကာဟ်၌သတို့သမီးအနေဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက် အသုံးစရိတ်မတောင်းဆိုရန်အမွေမယူရန်နှင့်ညမအိပ်ရန် (အမြဲမနေရန်) ကတိသစ္စာပေးရသည်။
တစ်နည်းဆိုရလျှင် လုံးဝမိုသာ(ခ)ယာယီနေကာဟ်နှင့်အလွန်တူ ပါသည်။ နှစ်ခုကြား၌ကွာခြားချက် သည်ကားမစ်ယာနေကာဟ်၌နှစ်ဦးနှစ် ဖက်မှ သဘောတူသလောက်မြောက်ပေသည်။ တရားဝင်ဖျက်သိမ်းသည် ဟုဆိုရာ၌ မိုသာနေကာဟ်ဖတ်သူအမျိုးသားအနေဖြင့်အဖတ်ခံသူအမျိုးသ မီးအား အသင်အားမိုသသ်ခ်ျ ပေးသည်ဟုဆိုလိုက်ခြင်းကိုခေါ်ဆိုပါသည်။
ဒီနေရာ၌ကျွန်တော်(ဟဇရတ်အာယာသွန်လ္လာဟ်အိုဇဟနစေရ်မ ကာရမ်မိုရှီရာဇီ)ပြန်ဆိုသူအနေဖြင့် တင်ပြလျှင်သင့်တော်ပေမည်။
အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် စွန်နီလူငယ်များအနေဖြင့်ကျွန်တော်ထံမေးမြန်းအ ဖြေတောင်းလာသောအကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်အား၎င်းတို့အနေဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းဖို့အခက်အခဲများနှင့်တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရချိန်၌ရှီအာ (ဓမ္မသတ်ပညာရှင်များ)၏အမိန့်ကိုလိုက်နာသင့်မသင့်ဆိုသောအချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်အဖြေပေးသည်မှာ လုံးဝအတားအဆီးမရှိပေ။ လိုက်နာနိုင်ပေသည်။ မိုသာ(ခ) ယာယီနေကာဟ်အားဆန့်ကျင်ပြီး မစ်ယာ နေကာဟ်ကိုလက်ခံသူများသည် အမှန်တကယ်မိုသာ(ခ)ယာယီနေကာဟ် အားပါးစပ်ဖြင့်မပြောသောလည်းအလုပ်ဖြင့်လုံးဝ၎င်းအလုပ်ကိုသာလုပ် ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အမှန်တရားတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။လူသားအနေဖြင့်လိုအပ်အရေး ကြီးသောအရာများကို ဖြည့် စွက်ရန်အဖြစ်အပျက်အမှန်တရားကိုလက်မခံ ဘဲမရပေ။သို့သော်အမည်မတတ်၊မယူကြသာလျှင်ရှိပေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့်မိုသာ(ခ)ယာယီနေကာဟ်အားဆန့်ကျင်သူများအနေဖြင့်သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ၊မသိလျက်နှင့်ဖြစ်စေမကောင်းသောကာမစပ် ယှက်မှု(ပြည့်တန်ဆာများအသုံးပြုခြင်း၊ဇေနာပြုခြင်းစသည်ဖြင့် …..) အား အားပေးအားမြောက်ပြုရာဖြစ်ပေသည်။
ထိုနည်းတူစွာမိမိတို့၏မကောင်းသောစိတ်အာသီသအားဖြည့်စွက် ရန်အတွက် မိုသာအား အလွဲသုံးစားလုပ်သူများအနေဖြင့် လူမှုရေးအသိုင်းအ၀န်း ကြီး၏အခက်အခဲများဖြေရှင်းပေးနိုင်သော မိုသာအားဖျက်ဆီးနာမည် ဖျက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။၎င်းတို့အနေဖြင့်မိုသာအားမတရားသောနည်း ဖြင့်သုံးခြင်းဖြစ်ဤနည်းဖြင့်လူမှုရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းကြီး၌ဇေနာ(တရားမ၀င်ကာ မစပ်ယှက်မှု)၌ပါဝင်ရာရောက်သ လို၎င်းဂိုနာအပြစ်၌လည်းပါဝင်ရာ ရောက်ပေသည်။
ဘယ်သို့ဆိုစေအစ္စလာမ်သာသနာသည်လူငယ်များ၏သဘာဝကို ဖြည့်စွက်ပေးသောကောင်းကင်ကျသာသနာဖြစ်ပါသည်။၎င်းတို့၏လိုအပ် ချက်အားလုံးကို (တရားဝင်)ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ဤအတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်မီအဟ်ကမ်(အစ္စလာမ်ဥပဒေ)၌ မိုသာအား မပြဋ္ဌာန်းဘဲမဖြစ်နိုင်ချေ။ ကျွန်တော်အနေဖြင့်ရှေ့၌ ဆက်လက် တင်ပြပါမည်။
မိုသာသည်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌သော်လည်းကောင်း၊တမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ)၏စွန္နတ်တော်၌သော်၎င်း၊အချို့သာဝကကြီးများ၏ကျင့်စဉ်၌တွေ့ရှိရပေမည်။ သို့သော်လည်းပဲအချို့လူများ၏ယုံကြည်ချက်အရဤအမိန့်(မိုသာ)အား (မန်စူခ်)ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်းတို့ထံ၌ မိမိယုံကြည်မှုကိုအနှိုင်းမဲ့သက်သေ ပြနိုင်နိုင်မပြနိုင်ဆိုသောအချက်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်ပေသည်။
သို့သော်ဤကဲ့သို့ခံယူထားသောအုပ်စုဝင်အားလုံးသည်သာမန် ပြည်သူ များ မဟုတ်ကြဘဲ အလ်စွန္နတ်ဂ်ျမအတ်၏ အချို့သာသနာ့ရှင်များ လည်းပါဝင်နေ ပေသည်။၎င်းတို့အနေဖြင့်အထက်ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်းပြော သည့်အပြင် အလွန်တစ်ဖက်စွန်းရောက်အစွဲကြောင့်မုန်းတီးသောဝါဒကြောင့် မိုသာအား လက်ခံသူများ၏စာအုပ်၊စာပေများကိုမလေ့လာဖို့နိုးဆော်ထား ပေသည်။ နောက်တစ်ခုပြောရလျှင်၎င်းအိုလမာများအနက်မှ အချို့သည် မိုသာကို သက်သေထူထားသောရှီအာစာအုပ်များမှစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပင် မလေ့လာထားသောကြောင့်တင်ပြအပ်ပါသည်။ဤအချက်သည်အလွန်တစ်ဖက်စွန်းရောက်သော၊မုန်းတီးသောအချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်ဤသေးငယ်သောစာအုပ်အတွင်း မိုသာနှင့်နေကာ (အမြဲမင်္ဂလာ၌ ကွာခြားချက်ကိုတင်ပြပါမည်။ သို့မှသာလျှင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ဟွတ်ဂ်ျဂျသ်အားလူတိုင်းအတွက်သက်သေပြပြီးသားဖြစ်သွား ပေမည်။
၁။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသည်နှစ်ဦးသဘောတူကမည်သူ၏ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်မှုမပါဘဲလက်ထပ်ထိမ်းမြား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂။နေကာဟ်စီကာဖတ်ရာ၌ نكاح နှင့်၊ ازدواج နှင့် ၊ متعه စကားလုံးများကို သာသုံးစွဲရပါမည်။အခြားစကားလုံးများကိုမသုံးစွဲရပေ။
၄။နေကာဟ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ချက်၊မဟာငွေများအတိအကျသိဖို့အရေးကြီးပေသည်။အကယ်၍မေ့သွားသည့်အခါအများစုမိုဂ်ျသဟစ်များ၏ ဖသ်ဝါအရအမြဲအတွက်နေကာဟ်ဖြစ်သွားပေသည်။(ဤအချက်သည်မို သာ၊နှင့်နေကာဟ်တူကြောင်းသက်သေပြဆိုသောအချက်နှင့်၊နေကာဟ်နှင့်မိုသာ၌သတ်မှတ်ရက်သာကွာခြားကြောင်းပြဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဂရုပြုစေလိုပါသည်။
၅။သတ်မှတ်ထားသောရက်၊လ၊ကုန်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် တွလာက်မြောက် သွား၏။ ထို့နောက်အဒ်ဒေ(အစ္စလာမ်ဥပဒေအရ အမျိုးသမီး အတွက်ရက် စောင့်ခြင်း)စောင့်ရပေမည်။(ကာမစပ်ယှက်ပြီးဖြစ်ဖို့လိုပေသည်။)
၇။မိုသာဖြစ်ရသောကလေးများနှင့်နေကာဟ်အမြဲဖြစ်ရသောကလေးများ အဟ်ကမ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမိဘနှစ်ပါးအတွက်သာသနာ့တာဝန်မှာအတူတူ ပင်ဖြစ်ပေသည်။မိုသာဖြစ်ရသောကလေးများသည်လည်းပဲနေကာဟ်အမြဲနှင့်ရသောကလေးများပမာအဖေ၊အမေ၊ညီအကို၊မောင်နှမများထံမှအမွေရပိုင်ခွင့်ရှိပေသည်။လုံးဝကွာခြားချက်မရှိပေ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤစကားအချက်အလက်များသည်အံ့ဩစရာ ဖြစ်နေပေမည်။ထိုသူများအနေဖြင့်မိုသာအားလုံးဝမကြားဘူးသူများ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏အမိန့်ဆန့်ကျင်မှု၊ဇေနာ(မတရားသောနည်းဖြင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု)နှင့်အတူတူဟုသတ်မှတ်ခံထားသူများအနေဖြင့်ပို၍အံ့ဩသင့်ပေသည်။
မှန်ပေသည်။မိုသာနှင့်အမြဲနေကာဟ်အကြား၌ခင်ပွန်းသည်နှင့်ဇနီးသည်အတွက်ကွာခြားမှုများရှိပေသည်။ဥပဒေအရ မိုသာ၌ခင်ပွန်းသည်နှင့် ဇနီးသည်၏အခွင့်အရေး၊ရပိုင်ခွင့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များရှိသော လည်း၊အမြဲနေကာဟ်၌ပို၍များပြားပေသည်။ထို့အတွက်ကြောင့်မိုသာ၌ လွယ်ကူမှု၊တာဝန်နည်းမှုကိုတွေ့ရ သည်။ဖေါ်ပြရမည်ဆိုလျှင်-
၁။မိုသာ၌အမျိုးသမီးအနေဖြင့်အသုံးစရိတ်နှင့်အမွေရမည်မဟုတ်ချေ။သို့ သော်အချို့ဖိုကာမာအနေဖြင့်ဖသ်ဝါပေးထားသည်မှာအကယ်၍အသုံးစရိတ် နှင့်အမွေကိုပါမိုသာ(ယာယီနေကာဟ်)မပြုခင်နှစ်ဦးသဘောတူထားပါကထိုအတိုင်းဆောင်ရွက်ရပေလိမ့်မည်။
၃။မိုသာ၌ ခင်ပွန်းသည်အတွက် ညအချိန်၌မိမိဇနီးနှင့်အတူနေဖို့အရေးမကြီးပေ။
အထက်ဖေါ်ပြပါစည်းကမ်းဥပဒေသများကိုအသေအချာဂရုပြုလေ့လာခြင်းဖြင့်အားလုံးသောသံသယဖြစ်မှု၊ဇဝေဇဝါဖြစ်မှု၊အမေးများစောဒကတက်စရာမလိုဘဲစောဒကတက်သူများအတွက်အဖြေများရရှိနိုင်ပေသည်။ထို့အပြင်မကောင်းသောအတွေးအခေါ်များလွယ်ကူစွာပျောက်ကင်းသွားပေမည်။၎င်းအပြင်မိုသာနှင့်ဇေနာ၌ မိုးနှင့်မြေခြားနားနေပါလားဆိုသော အမှန်တရားဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပါ သိရှိသွား ပေမည်။မိုသာနှင့်ဇေနာကိုနှိုင်းယှဉ်သူတို့ သည်မသိနားမလည်သူနှင့် သူနှစ်ခုအကြား၏အမှန်တရားကိုမသိသူများဖြစ်ပါသည်။
အချို့အရမ်းဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းပြီးမဝင်ခံဘဲမရသောအမှန်တရားတစ်ခုသည်ကား-မိမိမကောင်းသောစိတ်ဆန္ဒနောက်လိုက်တတ်သူများ၊အ လွဲ သုံးစား လုပ်တတ်သူများအချို့ကြောင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း၏အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းပေးသောမိုသာအားမိမိတို့၏လက်ကစားစရာဖြစ်အောင်၊ဆင်ခြင်တုံတရားအပြည့်ဖြစ်စီမံထားသောမိုသာကိုစောဒကများ တက်အောင်လုပ်ကြပါသည်။
သို့သော်လည်းပဲမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုသည်ကားဤမိုသာမှအပအ ခြားအလွဲသုံးစားအပြုမခံရသောအရာရှိပါသနည်း။မည်ကဲ့သို့သောအဖိုး တန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရှိပါသလဲ?မသမာသူများအနေဖြင့်အလွဲသုံးစားမပြုခဲ့ပါသလော!
အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်သည်စစ်မှန်တိကျသောအစီအစဉ်မရှိလျှင်လက်ခံဖို့မဖြစ်နိုင်သောခေတ်ဖြစ်ပါသည်။ဤအတွက်ကြောင့်ရှိုင်တွာန်လိုမျိုးလူစားများ၏အစီအစဉ်များပျက်စီးသွားရအောင်ပညာရှိသူများ၊အ တွေးအခေါ်ကောင်းသူများစုပေါင်း၍စစ်မှန်သောအစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဥပဒေများရေးဆွဲရပေမည်။ထိုမှသာလျှင်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ဥပဒေအမိန့်များ၏တန်ဖိုးရှိ၊အကျိုးရှိကြောင်းပေါ်လွင်လာပြီး၊မကောင်းသော အာသီသရှိသူများ၊ယုတ်မာသူများ၏လမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားသကဲ့သို့ဖြစ်ပေ မည်။
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً…
ဤကဲ့သို့ရှိနေပါလျက်အချို့သူများအနေဖြင့်استمتاع၏ဆိုလိုချက် သည်အရသာယူရန်နှင့်ကာမစပ်ယှက်ရန်ဟုအခါခါအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ထို့ကြောင့်အာယတ်တော်၏ဆိုလိုချက်မှာဇနီးသည်နှင့်ကာမစပ် ယှက်လိုသည့်အခါ မဟာငွေပေးဆောင်ရမည့် အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်နေပါသည်။
ပထမအချက်။ ။မဟာငွေပေးဆောင်ရန်အချိန်သည်နေကာဟ်ဖတ်ချိန်ဖြစ် ပါသည်။နေကာဟ်ဖတ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အမျိုးသမီးသည်မိမိမဟာငွေတောင်းခံနိုင်ပေသည်။ဤနေရာ၌ကာမစပ်မှုနှင်အရသာခံမှုဆိုသောသတ် မှတ်ချက်မပါပေ။(မှန်လှပေသည်။အစါဂ်ျသလာခ်ကာမစပ်ယှက်မည်အ လျင်းဖြစ်ပါကမဟာငွေတစ်ဝက်သာပေးဆောင်ရပေမည်။ဂရုပြုရပေမည်။)
ရှီအာဖေကာပညာရှင်ကြီးများနှင့်ရီဝါယသ်တော်များ၏အမြင်၌ယာယီနေ ကာဟ်ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤဆိုလိုချက်အတွက်သက်သေများအ ဖြစ်အကျယ်တဝင့်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့်ဖတ်ရှုရပေလိမ့်မည်။
၁။အချို့သောသူများအနေဖြင့်استمتاع၏အဓိပ္ပါယ်ကိုအရသာယူခြင်း၊ဟုဖြန့်ဆိုထားပြီး သက်သေအထောက်အထားဖြင့်အချို့သောသာဝကကြီးများသ ဗေအီး(န)ကြီး၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖေါ် ပြထားပါ သည်။
အကယ်၍အသေအချာဂရုစိုက်ဤနှစ်ချက်အားလေ့လာသုံးသပ် မည်ဆိုလျှင်ဒုတိယအချက်သည်ပိုမို၍ခိုင်လုံကြောင်းတွေ့ရပေသည်။အ ကြောင်းသည်ကားရှာရီအသ်စကားအရမိုသာနှင့်استمتاع ဆိုသည်မှာယာယီ နေကာဟ်ကိုဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းအပြင်မဟာငွေပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အရ
ရှီအာ၊စွန်နီသာသနာ့ပညာရှင်များအမြင်၌ဤကိစ္စနှင့်ပက်သက်ပြီးမိုသာသည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏လက်ထက်၌ရှိခဲ့ကြောင်းတညီတညွတ်တည်း လက်ခံထားပါသည်။သို့သော်လည်းပဲစွန်နီဖေကာသာသနာ့ပညာရှင်အများစု အနေဖြင့်ဤအမိန့်သည်နောက်ပိုင်း၌ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရသည်ဟုလက်ခံယုံကြည်ထားကြသည်။သို့သော်လည်းပဲဘယ်အချိန်မှစ၍ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်းနှင့်ပက်သက်ပြီးအကွဲအလွဲရှိပါသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်သည်ကားတင်ပြထားသူများအနေဖြင့်စောဒကတက်စရာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ရီဝါယသ်တော်များတင်ပြ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အထူးသဖြင့် ခိုင်ဘဲရ်စစ်ပွဲ၌ တားမြစ်ခဲ့ပါသလား။ နောက်ဆုံးဟဂ်ျ၌တားမြစ်ခဲ့ပါသလားဆိုပြီးရီဝါယသ်သည်ကျော်ကြားလှပေသည်။သို့သော်လည်းအချို့ဖေကာပညာရှင်များအနေဖြင့်ဤရီဝါယသ်နှစ်ခုစလုံးအားစုပေါင်းရာ၌အရမ်းကြိုးစားခဲ့သော်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ကြပေ။
၎င်းထက်ပို၍စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှသည့်အချက်သည်ကား ရှာဖေအီဆီမှတင်ပြထားသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။၎င်းအနေဖြင့်ပြောကြား သည်မှာ-
لا أعلم شيئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلاّ المتعة
ကျွန်တော်အနေဖြင့်မိုသာမှအပအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သည်တစ် နေ့၌ ဟလာဟ်ပြုလုပ်ပြီး၊နောက်ဟရမ်သတ်မှတ်၏။နောက်တစ်ခါဟလာလ်ပြုလုပ်ပြီး၊ဟရမ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းအကြောင်းအရာများကိုပါသတ်မှတ်ထားကြောင်း မသိရှိပေ။
အဗ်နေအသီးနဇ်ရဟ်အနေဖြင့်တင်ပြသည်မှာ-ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဂျ နာဗေဂျဘေအဗ်နေအဗ်သွလ္လာဟ်အန်စာရီထံ၌ရှိနေချိန်တွင်၎င်းမှမိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ-အဗ်နေအဘာစ်နှင့်အဗ်နေဇိုဟရ်အကြားမိုသာယေနေစာ နှင့်မိုသာယေဟဂ်ျတို့သည်ပတ်သက်ပြီးကွဲလွဲမှုရှိပေသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်အသင်(ဂျနာဗေဂျာဘေအဗ်နေအဗ်သွလ္လာဟ်အန်စာရီ)မည်ကဲ့သို့သုံးသပ်ပါမည် နည်းဟုမေးခဲ့၏။အဖြေပေးသည်မှာ-ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်၎င်းမိုသာနှစ်မျိုးစလုံးကိုတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏လက် ထက်၌ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။အိုမာရ်အနေဖြင့်ဟရမ်ဟုသတ်မှတ်လိုက်မှသာမကျင့်သုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဂျနာဗေဂျာဘေ၏ကျော်ကြားသောရီဝါယသ်တစ် ပါးကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။၎င်းရီဝါယသ်ကိုအချို့ကျော်ကြားသောစွန်နီဖေကာ သာသနာ့ ပညာရှင်များ၊ဟဒီးစ်ပညာရှင်များ၊သဖ်စီးပညာရှင်များအနေဖြင့်မိမိတို့၏ကျမ်းများ၌ဒုတိယခလိဖွာ၏စကားအတိုင်းအချို့ဝါကျများကိုအောက်တွင်ဖေါ် ပြထားပါသည်။
متعتان كانتا مشروعتين فى عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) و أنا أنهى عنهما متعة الحجّ و متعة النساء
ဤဟဒီးစ်တော်သည်ကျော်ကြားသောဟဒီးစ်တော်ဖြစ်ပြီးအနည်း ငယ်သောကွာခြားမှုကွဲပြားမှုနှင့်အတူအိုမာရ်အနေဖြင့်လူထုအားမင်ဘဲရ် ပေါ်မှဟောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဤနေရာ၌၎င်းဟဒီးစ်နှင့် ပက်သက်ပြီးအဟ်လေစွန္နတ်၏အကိုးအကားအရကျမ်းကိုတင်ပြပါမည်။
၁။ مسند احمد، جلد 3، صفحه 325
၂။ سنن بيهقى، جلد 7، صفحه 206
၃။ المبسوط سرخسى، جلد 4، صفحه 27
၄။ المغنى ابن قدامه، جلد 7، صفحه 571
၅။ محلى ابن حزم، جلد 7، صفحه 107
၆။ كنزالعمّال، جلد 16، صفحه 521
၇။ تفسير كبير فخر رازى، جلد 10، صفحه 52
ဒုတိယခလီဖာအနေဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ခွင့်ပြုချက်အ ထောက်အထားအခိုင်အလုံရှိလျက်၌ပင်ဥပဒေအသစ်ကိုရေးဆွဲသည့်သတ္တိ ပြခဲ့ပေသည်။အမှန်တကယ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏မိန့်ဆိုထားသည် မှာ-
…وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا …
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မှအပအခြားသူများ၌လည်းအလ္လာဟ်အ ရှင်မြတ်၏ဥပဒေသများပါဝင်ရောက် စွက်ဖက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသလား?
အရေးကြီးသောကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော-ထင်ရှားခိုင်လုံသော၊ရှင်းလင်းပြတ်သားသောသက်သေအထောက်အထားရှိပါလျက်နှင့်အဂ်ျသေမဒ်ကိုသုံးမည်ဆိုလျှင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ဥပဒေ သများသည် ဖျက်ဆီးမှုမှကင်းရန်လွယ်ကူမည်မဟုတ်ချေ။
အမှန်တော့ပျက်ပြယ်သောတွေးတောမှုတစ်ခုပင်ဖြစ်ပေသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဟဂ်ျနှင်အိုမရာသာကျင့်စဉ်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အ ကြား၌ ၁လအထိအချိန်ဆွဲလိုရပေသည်။
မွတ်စလင်များအားလုံးအနေဖြင့်ရှောင်ဝါလ်နှင့်ဇီးလ်ဟဂ်ျလမြတ် များ၌မက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော်သို့ခရီးထွက်ကာအိုမရာပြုလုပ်ပြီးဇီးလ်ဟဂ်ျလ(၈)ရက်နေ့ထိလွတ်လပ်စွာနေရပြီး၊ထို့နောက်ဟဂ်ျပြုလုပ်ရန်အတွက်စည်း ကမ်းများစောင့်ထိန်းရမည်ဖြစ်ပြီးအရ်ဖာကွင်းပြင်ဘက်သို့ခရီးထွက်ရပါ သည်။
အချို့လူများ၏စဉ်းစားပုံသည်မိုသာနှင့်ပက်သက်ပြီးဤကဲ့သို့ဖြစ်၏။အကယ်၍မိုသာကိုပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါကဇေနားကိုသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသွားပေမည်။အကြောင်းသည်ကား မည်သည့်အမျိုးသားမဆို သူစိမ်းအမျိုးသမီးနှင့်အတူ တွေ့ရချိန်၌ကျွန်တော်တို့မိုသာဖတ်ထားပါသည်ဟုလိမ်ညာ ပြောဆိုလိုရပေသည်။
نَهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلاّ شَقِى لَوْ لاَ أنّ عُمَر
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏လက်ထက်၌မဟုတ်ကြောင်း၊ဤအ တွက်မြောက်များစွာသောရီဝါယသ် တော်များအကိုးအကားများရှိပေသည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားတစ်ယောက်သည်မိုသာနှင့်ပက်သက်ပြီးအဗ်သွလ် လ္လာဟ်အဗ်နေအိုရ်မာအားမေးမြန်းရာ-၎င်းအနေဖြင့်ဟလ္လာဟ်ဖြေကြား သည်၊ဒုတိယအကြိမ်၊၎င်းဆီးရီးယားနိုင်ငံသားသည်လူကြီးမင်း၏ဖခင်အားဟရမ်ဟုမသတ်မှတ်ထားပါသလောဟုထပ်မေးမြန်းရာဖြေကြားသည်မှာ-
أبى أرأيت إن كان أبى قد نهى عنها و قد سنّها رسول الله، أنترك السنّة و نتبع قول
“အကယ်၍ငါအဖေကတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏စွန္နတ်တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအရာကိုတားမြစ်ခဲ့လျှင်၊ငါအဖေသည်တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ စွန္နတ်တော်အားချိုးဖေါက်မှုလမ်းစဉ်ကိုငါလိုက်ရမည်လော!”
“ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏လက်ထက်၌စွန်ပလွန်သီး၊ ဂျုံမှုန့်အနည်းငယ်ကိုမဟာငွေအဖြစ်ပေးဆောင်ပြီးရက်အနည်းငယ်အတွက်မိုသာဖတ်ခဲ့ကြသည်။ဤအလုပ်အားအဘူဘာကဲရ်လက်ထက်အထိလုပ် ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အိုမာရ်အနေဖြင့်အိုမာရ်ဘင်အရီးစ်၏အ ဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်ဟရမ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပေသည်။
(ဃ)အဗ်နေအဘာစ်သည်၎င်းအား(حبر الأمّة )(အစ္စလာမ်အွန်မသ် အတွက်အာလင်နှင့်ပညာရှင်)ဟုသောဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။၎င်းသည်မိုသာအားတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏လက်ထက်၌ဟရမ်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းလက်ခံသူများစာရင်း၌ပါဝင်ပေသည်။
ထားပေသည်။(ဆိုလိုသည်မှာ-မျက်စိမမြင်ရုံတင်မကဘဲစဉ်းစားဥာဏ်ပါ မရှိသူဖြစ်ပေသည်။)ဤအတွက်ကြောင့်မိုသာဖတ်လိုရသည်ဟုဖသ်ဝါပေး နေသည်။၎င်းတို့၏ပြောဆိုလိုသူသည်အဗ်နေအဘာစ်ဖြစ်ပေသည်။(ထိုအ ချိန်၌အဗ်နေအဘာစ်သည်ကန်းနေသူ၊မျက်မမြင်တစ်ဦးဖြစ်ပေသည်။)
ဤစကားကိုကြားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အဗ်နေအဘာစ်သည်မတ်တပ်ရပ်ထားပြီးမိန့်တော်မူ၏။“အသင်ဟာနားမလည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပေတယ်။အကျွန်ုပ် အသက်၏ကစမ်၊ကျွန်ုပ်တို့သည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ လက်ထက်၌သာ ဤအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေသည်။”
အဗ်နေဇိုဗိုင်းရ်သည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကိုမလေးစားတော့ဘဲ ပြန်ပြော၏။“အခုအချိန်၌လုပ်ပြပါလား။ခိုဒါကစမ်ခဲနှင့်ပေါက်သတ်ပြမယ်။” တစ်နည်းဆိုရလျှင်ခြိမ်းခြောက်ပြီးအဖြေပေးခဲ့ပေသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အဗ်သွလ္လာဟ်အဗ်နေဇိုဗိုင်းရ်သည်ထိုအချိန်အခါ၌ဤကဲ့သို့အဖြေပေးရဲသည်မှာအာဏာရှိနေသောအချိန်ဖြစ်ပေသည်။ မက္ကာဟ်မြို့တော်သည်သူ၏လက်ထက်၌ရှိနေပေသည်။ဤအတွက်ကြောင့်အဗ်နေအဘာစ်ကဲ့သို့သောသာသနာ့ပညာရှင်ကိုပင်၊ပူပန်စိုးရိမ်မှုမရှိဘဲ၊မ လေးမစားပြန်ပြောရဲခဲ့ပေသည်။
အမှန်တကယ်အဗ်နေအဘာစ်သည်အသက်အားဖြင့်အဗ်သွလ္လာဟ်အဗ်နေဇိုဗိုင်းရ်၏အဖေအရွယ်ဖြစ်ပြီး၊ပညာအားဖြင့်မယှဉ်နိုင်ပေ။အကယ်၍ ပညာအရည်အချင်း တူပါသည်ဟုဆိုလျှင်လည်း၎င်းသည်အဗ်နေအဘာစ် အားဤကဲ့သို့မလေးမစားပြုပိုင်ခွင့်မရှိချေ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အကယ်၍တစ်ဦးတစ်ယောက်သည်ဤ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်၏ဖသ်ဝါအပေါ်ကျင့်သုံးမည်။နောက်မှားယွင်းကြောင်းသိမည်ဆိုလျှင်လည်းဤလုပ်ရပ်သည် وطى به شبهه ဖြစ်ပေသည်။
လူတိုင်း وطى به شبهه ဆိုလိုခြင်းကိုသိပေသည်။ထိုအတွက်ကြောင့် ခဲဖြင့်ပေါက်သတ်ရသည့်ဆင့်ထိမရောက်သေးသဖြင့်ဤကဲ့သို့ကြိမ်းမောင်း ခြင်းသည်အဓိပ္ပါယ်မဲ့သောလုပ်ရပ်တစ်ခုနှင့်၊ပညာမတတ်သောသူ၏လုပ် ရပ်ဖြစ်ပေသည်။သို့သော်လည်းပဲဤကဲ့သို့အပြုအမူသည်အဗ်သွလ္လာဟ် အဗ်နေဇိုဗိုင်းရ်ကဲ့သို့မသိ၊နားမလည်သူ၊မလေးမစားလုပ်သူ၊လူငယ်လုပ် သည်မှာအံ့ဩဖွယ်မဟုတ်ပေ။
စိတ်ဝင်စားစရာအချက်မှာရဂါဗ်သည်မိမိစာအုပ် محاضرات တွင်တင်ပြထားသည်မှာအဗ်သွလ္လာဟ်အဗ်နေဇိုဗိုင်းရ်ကအဗ်နေအဘာစ် အားချိုးနှိမ်ပြီးပြောသည်မှာ-အဘယ်ကြောင့်မိုသာကိုဟလ္လာဟ်လိုသတ်မှတ်ရပါသနည်း?ဂျနာ ဗေအဗ်နေ အဘာစ် သည်အဖြေပေးသည်မှာ“မင်းအမေကိုသွားမေးကြည့်လို့ဖြေ၏။ ၎င်းသည်မိမိ၏အမေထံသွားပြီးမေးသောအခါအဖြေရသည်မှာ-
زمانى بود كه من متعه پدرت بودم ما ولدتك الا فى المتعة; تولد تو در
၂။အချို့ရီဝါယသ်တော်များ၌လာရှိသည်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် عام الفتح (ဟီဂျရီ၈ခုနှစ်)၌ဟလ္လာဟ်အဖြစ်မိုသာကိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီးရက် အနည်းငယ်နောက်ပိုင်းတားမြစ်ခဲ့ကြောင်းဖေါ် ပြထားပါသည်။
၃။ အချို့ရီဝါယသ်တော်များ၌လာရှိသည်မှာမက္ကာဟ်မြို့အနီးရှိဟဝါ ဇန်းမြေ၌ဖြစ်ပွါးခဲ့သောအိုသာစ်စစ်ပွဲပြီးနောက်(၃)ရက်သာမိုသာဖတ်ခွင့်ပေး
အကယ်၍ကျွန်ုပ်ထံ၌အားလုံးသောရီဝါယသ်တော်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး သုတေသနပြုနိုင်လျှင်ပို၍ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိနိုင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍အဟ်လေစွန္နတ်၏အကျော်အမော်သာသနာ့ပညာရှင်နူးရိုင်း သည်စဟီးမွတ်စလင်အဖွင့် ကျမ်း၌ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအချိတ်အဆက်ရှိသောရီဝါယသ်တော်(၆)ခုကိုတင်ပြ ပါမည်။
၂။မိုသာ عمرة القضاءတွင်ဟလ္လာဟ်ဖြစ်ပြီးနောက်မှဟရမ်ဖြစ်သွားပေသည်။
၃။မိုသာ فتح مكّه အချိန်၌ဟလ္လာဟ်ဖြစ်ပြီးနောက်မှဟရမ်ဖြစ်သွားပေသည်။
၆။မိုသာသည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏နောက်ဆုံးဟဂ်ျ၌ဟလာဟ်ဖြစ် သွားကြောင်းဖေါ် ပြထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်မိုသာအမိန့်မှလွဲ၍အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အနေဖြင့်အရာကိစ္စတစ်ခုကိုဟလာဟ်အမိန့်ပေးပြီးနောက်ဟရမ်၊နောက်တစ်ခါ ဟလာဟ် သတ်မှတ်ပေးပြီးနောက်ဟရမ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းမတွေ့ရသေး ပေ။
သုတေသီတိုင်းဤကဲသို့ဆန့်ကျင်ဘက်ရီဝါယသ်တော်များကိုလေ့လာသုံးသပ်ချိန်၌လုပ်ကြံထားသောရီဝါယသ်တော်အတုအပများကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး အရအခြားကစားထားသောကစားကွက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းယုံ ကြည်မည့် အချက်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
ဤကဲ့သို့ကွဲလွဲမှုများသည်နိုင်ငံရေးနှင့်ပက်ရန်အန္တရာယ်ရှိနေသော ပြသာနာတစ်ခုခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသဖြင့်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါသ လော!ထို့ကြောင့်လည်းပဲအချို့ဟဒီးစ်တော်များကိုအကြံအဖန်ပြုလုပ်ပြီးအတုလုပ်ကာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏သာဝကတော်ကြီးများ၏အမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေ သည်။ဟဒီးစ်တော်များကို၎င်းတို့သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) ထံမှတစ်ဆင့်ပြတ်သည်ဟု(ပြောရဲ၊ရေးရဲ)ပြီးမစိုးရိမ်မကြောင့်ကြတော့ပေ။
“ရစူလ်(ဆွ)၏လက်ထက်၌နှစ်ခုသောအရာသည်ဟလ္လာဟ်ဖြစ်၏။၎င်းနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဟရမ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေမည်။နှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခုသည်ကား မိုသာဖြစ်ပေသည်။”
အကယ်၍ဤကဲ့သို့အွန်မသ်နှင့်အစ္စလာမ်ခလီဖွာများအနေဖြင့် (အဟ်ကမ်မေအစ္စလာမ်)အစ္စလာမ်ဥပဒေသများကိုပြောင်းလဲလာလျှင်တား မြစ်ထိန်းသိမ်းဖို့ကျွန်ုပ်တို့ထံ၌မည်သို့သောသက်သေအထောက်အထားမရှိ
ဤသို့ဖြစ်လျှင်အစ္စလာမ်ဥပဒေသများ၌ဝါဂျဗ်နှင့်ဟရမ်များကို ပြောင်းလဲမှုရှိလာပြီးအစ္စလာမ်သာသနာသည်တဖြည်းဖြည်းဖျက်ဆီးကွယ် ပျောက်သွားပေမည်။
ဤအတွက်ကြောင့်ဒုတိယခလီဖာ၏အမိန့်သည်ဆိုးကျိုးသက် ရောက်မှုကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အချို့အနေဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)လက်ထက်၌ပင်၎င်းအရာနှစ်ခုစလုံး(ဒုတိယခလီဖာတားမြစ်ထားသောအ ရာ)ဟရမ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြ၏။
ဤအတွက်ကြောင့်ဟဒီးစ်အတုများကိုအစစ်ပုံသွင်း၍သာဝကတော်ကြီးဘက်မှရရှိသည်ဟုပြောဆိုရန်သတ္တိရှိလာကြသည်။အကြောင်းသည် ကားဤဟဒီးစ်တော်များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမကိုက်ညီသည့်အပြင်ဆန့် ကျင်နေသဖြင့်အတုအယောင်များဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလာပါသည်။
အကယ်၍ဤကဲ့သို့မဟုတ်ပါကဆန့်ကျင်ဘက်ဟဒီးစ်တော်များကို တစ်နေရာတည်း စုစည်းတင်ပြဖို့မဖြစ်နိုင်ပေ။မည်မျှအထိပင်အလ္လာဟ်အရှင် မြတ်၏ဥပဒေ(အဟ်ကမ်)ကိုကလေးကစားစရာကဲ့သို့လုပ်ထားသည်ဆို
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)လက်ထက်၌အခြေအနေအရ၊အမှန်တ ကယ်အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်ကိုဖြေရှင်းရန်အလို့ငှာမိုသာအားလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤလိုအပ်ချက်သည်ခေတ်တိုင်းအတွက်လိုအပ် နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထွေကြောင့်အိမ်တောင်မပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ဤနေရာ၌ ကာမလိုက် စားသူ၊နီယသ်မကောင်းသူများမပါဝင်ပေ။)
ထိုကာလ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အချိန်အခါ၌ အစ္စလာမ်လမ်းစဉ် ကနေ လမ်းလွဲ၊လမ်းမှားဖြစ်ပေမည်။အစီအစဉ်များမရှိခဲ့ချေ။ထိုအချိန်ခေတ် ကာလ၌ဟေဂျပ်မဝတ်သူအမျိုးသမီးများ၊ဟေဂျပ်ကိုပေါ့ပျက်ပျက်ဝတ်သူအမျိုးသမီးများ၊စာရိတ္တကိုပျက်ပြားစေသောရုပ်ရှင်များ၊ရုပ်မြင်သံကြား၊အင်တာနက်၊စလောင်းလိုင်းများ၊စာရိတ္တကိုပျက်ပြားစေသောစားသောက်ဆိုင် များ(နိုက်ကလပ် စသည်ဖြင့်)၊ စာရိတ္တကိုပျက်ပြားစေသောဝတ္တုစာအုပ်၊ ကာတွန်းစသည်ဖြင့် လူငယ်၊လူရွယ်များကိုလမ်းမှားစေသောအရာများမရှိသေးပေ။
ထိုကဲ့သို့(စာရိတ္တကိုပျက်ပြားစေသောအရာများဆက်သွယ်မှုများ)မရှိသေးသော ကာလ၌ပင်မိုသာအားလိုအပ်သောအရာတစ်ခုအဖြစ်သတ် မှတ်ပေးခဲ့လျှင်၊ယနေ့အခုလိုစာရိတ္တကိုပျက်ပြားနေသည့်ကာလ၌ဟရမ်ဖြစ်ပြီးလော! ဟရမ်ဖြစ်သွားပါသည်ဟုဆိုသောစကားသည် ဒဿနကျပါသလော!
အားလုံးသောစကားများကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပါ။ဖေကာပညာရှင်အများစုသည်မိုသာကိုဟရမ်ဟုသတ်မှတ်ထားပြီး၊အုပ်စုတစ်စုသည် ဟလာဟ်ဟု သတ်မှတ်ထား၏။ထို့အတွက်ကြောင့်ကွဲလွဲသောဖေကာဥပဒေတစ်ခုဟုသတ်မှတ်နိုင်ပေသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ဟလ္လာဟ်ကိုခံယူထားသူများအနေဖြင့်မိမိ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုအားအစ္စလာမ်မီး(န)အဟ်ကမ်အပေါ်မ ကျင့်သုံးသူများဟု စွပ်စွဲ၍မရ သလို၊ဟရမ်ဟုခံယူထားသူများအနေဖြင့်လည်းမိမိ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုအား العياذ بالله ဇေနာ(တရားမဝင်နေကာ)လုပ် သူများ၊အားပေးသူများဟု စွပ်စွဲ၍မရပေ။
أنّها بقيت السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم ذهب
“အွန်မသ်အများစုသည်မိုသာနှင့်ပက်သက်သောအမိန့်သာဖျက် သိမ်းခဲ့ရပြီဟုခံယူထားသော်လည်း၊အုပ်စုတစ်စုသည်မဖျက်သိမ်းခံရသေး ကြောင်းယနေ့အထိပင်ခံယူထားပေသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်တစ်အုပ်စုနှင့်တစ်အုပ်စုမိမိတို့၏ဆန့်ကျင် ဘက်အုပ်စုအားမတရားစွပ်စွဲမည့်အလျင်နှင့်မတော်မတရားမပြောဖို့၊ပြော မည့်အရင်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံ၍(အသေအချာ၊တရားမျှမျှတတ)လေ့လာပြီးအဆုံးအဖြတ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်လျှင်၎င်းအနေဖြင့်မိုသာကိစ္စသည်ယခုအချိန်အထိအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏အမိန့်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်း၊စည်းမျဉ်းများ အရဟလ္လာဟ်ဖြစ်ကြောင်း၊မြောက်မြားစွာသောအ ခက်အခဲများအတွက်ဖြေရှင်းပေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရမည်ဟုယုံကြည်ကြည်ဖြင့်ပြောနိုင်ပါသည်။